प्रेरक प्रसंग – Janaubhar
Aug292018 by janaubharNo Comments
१.अन्डरलाइन गरेर पढ्ने ः कतिपयको बानी पढ्दै अन्डरलाइन गर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा अर्को पटक आफूलाई चासो लागेको बिषय खोज्न सजिलो हुन्छ । परीक्षा दिने केही दिन अघि अन्डरलाइन गरेको बिषय दोहो¥याउँदा सम्झन सजिलो हुन्छ । २. आफ्नो नोट आफैँ बनाउने ः धेरैले परीक्षा आउने बेला साथीभाइसँग नोट मागेर पढ्ने गर्छन् । आफैँले नोट बनाउँदा सम्झन सजिलो हुन्छ । शिक्षकले भनेको केही प्वाइन्टको प्रयोग गर्ने र आफ्नै भाषामा
सफलता प्राप्तिका लागि के गर्ने ?
जीवनमा उतारचढाव आइरहन्छ । जसको दिमाग स्वस्थ हुन्छ, उसले यस्ता उतारचढावलाई सहजै स्वीकार्छ । दिमागलाई स्वस्थ राख्नका लागि आफूसँग रहेका सामान्य अस्वस्थ व्यवहार पन्छाउनु पर्छ । आफ्नो व्यवहार,भावना र विचार नियन्त्रण गर्न सकियो भने सफलता नजिकिँदै जान्छ । गल्ती महसुस गर्ने, तनाव नलिने गल्ती कसले गर्दैन ? जानेर पो गर्नुहुँदैन । नजानेर हुने गल्तीका लागि धेरै मान्छे पछुताउँछन् । तर, यो बानी राम्रो होइ
ठूला सपना पूरा गर्न आफूले चाहेको आवश्यकतालाई परिभाषित गर्नुपर्छ र कसरी हासिल गर्ने पूरा चित्र बनाउनुपर्छ । हामीले जे काम गछौं, हेर्दा त्यसको उति महत्व नहुन सक्छ । हामीले ध्यानपूर्वक हाम्रो कामलाई नहेरेका हुन सक्छौं । तर हरेक दिन हामीले गरिरहेका कामलेनै हाम्रो अद्वितीय बानी (ह्याविट) बनेको हुन सक्छ । हामीले जे काम दोहो¥याई ते¥याई गछौं । त्यही काम हाम्रो बानी बन्न पुग्छ । बानी बन्ने अवस्थासम्म हामील
हामीलाई बुद्धि कसरी मिल्न सक्छ ?
एक युवकले सुकरातलाई सोधें कि उनलाई बुद्धि कसरी मिल्न सक्छ । मसँग आऊ, सुकरातले जवाफ दिए । त्यसयुवकलाई लिएर सुकरात नदीमा गए र शिर डुबाइ दिए । उनले युवकलाई सासको लागि नछट्पटाउँदासम्म डुबाइरहे । अनि उसलाई छोडिदिए । जब युवक केही सहज अवस्थामा आयो तब सुकरातले उसंग सोधे,जब तिम्रो शिर पानीमा डुबेको थियो, त्यसबेला तिमीले सबैभन्दा बढि के को चाहना गथ्यौं ? हावाको युवकले उत्तर दियो । डुबेको बेला हावा चाहे ज
May102018 by janaubharNo Comments
प्रकाशित मितिः बिहिबार, बैशाख २७, २०७५ |
हामी किन सफल हुन खोज्छौं, किन धन आर्जन गर्ने चाहना राख्छौं, किन लोकप्रिय हुने प्रयास गछौं, किन नाम कमाउन चाहन्छौं, किन मिठो मसिनो खान खोज्छौ, किन रमाइलो गर्न मन गछौं ? यी सबै प्रश्नको एकमुष्ठ जवाफ हो, खुसी हुनका लागि । आखिर हामी जे जति काम गछौं ती सबैको सार हो,खुसी । मिठो खाएर होस् नाचगान गरेर होस,प्रतियोगिता जितेर होस्,सुविधा भोग गरेरै होस् हामीले खुसी खोजिरहेका हुन्छांै । घतलाग्दो त के भने,त्यो